Digital Narị Afọ Iri Copyright Act ("DMCA") | SActivator.com
Sactivator.com bụ na nnabata na 17 U.S.C. § 512 na Digital Narị Afọ Iri Copyright Act ("DMCA"). Ọ bụ anyị iwu ime ihe ọ bụla ịda iwu na-ahụ ihe kwesịrị ekwesị na omume n'okpuru Digital Narị Afọ Iri Copyright Act ("DMCA") na ndị ọzọ na ọdabara arịa amamihe iwu.
Ọ bụrụ na gị ikike imepụtaghachi e posted na sactivator.com ma ọ bụ ma ọ bụrụ na njikọ gị ikike imepụtaghachi na-lọta site na anyị search engine na ị chọrọ a ihe onwunwe wepụrụ, ị ga-enye a dere nkwurịta okwu na nkọwa ndị ọmụma depụtara na-esonụ ngalaba. Biko mara na ị ga-atụba maka emebi obosara (gụnyere akwụ ụgwọ na ọkàiwu 'ụgwọ) ọ bụrụ na ị na-ezochi ndị ọmụma depụtara na anyị na saịtị na-di obere on your nwebiisinka.
Anyị na-egosi na i buru ụzọ kpọtụrụ onye ọka iwu maka iwu aka na okwu a.
Ndị na-esonụ ọcha ga-gụnyere gị nwebisiinka ịda iwu na-azọrọ:
Enye ihe àmà nke ikike mmadụ ji mee ihe na nnọchite nke onye nwe nanị nri na-kwuru infringed.
Ezu ozi kọntaktị nke mere na anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị.
Ị ga na-agụnye a nti email address.
Ị ghaghị ịmata zuru ezu zuru ezu na nwebiisinka ọrụ ekwu na e infringed na gụnyere ọ dịkarịa ala otu search okwu n'okpuru nke ihe onwunwe egosi na sactivator.com search results.
A na nkwupụta na mkpesa party nwere ezi okwukwe na-eji nke ihe onwunwe ke ido mere mkpesa nke ọbụghị site nwebisiinka nwe, ya mara mọbụrụ, ma ọ bụ iwu.
A na nkwupụta na ozi ke ngosi na-ezi ezi, na ntaramahụhụ nke aṅụ iyi ụgha, na mkpesa party na-ikike ime omume na nnọchite nke onye nwe nanị nri na-kwuru infringed.
A ga-aka site nyere ikike mmadụ ji mee ihe na nnọchite nke onye nwe nanị nri nke na-kwuru na a na-infringed.
Zipu ịda iwu mara!
ling gị mkpesa ọzọ na ndị ọzọ dị ka anyị Internet Service Provider agaghị expedite gị arịrịọ ike ịkpata a na-egbu oge omume n'ihi ihe gbasara akwụkwọ mkpesa bụghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-gbara akwụkwọ.
Jide n'aka Tupu DMCA